10 Ciyaaraha Android ee ugu Fiican Internet la'aan | Golaha Moobaylka
Videogames waa qayb aan joojin kobcinta jibbaar ahaan tobankii sano ee la soo dhaafay; aad u badan sidaas Hadda waa warshadaha soo saara dakhliga ugu badan ee qaybta firaaqada maqalka, sidaasna ay ku soo saaraan dakhli ka badan kan filimka iyo muusigga la isku daray. Tani waa wax la filan karo, maaddaama shineemo iyo muusig labaduba ay ku jiraan marin iibinta filimada ama diiwaanka muusigga ayaa gebi ahaanba baaba'aya, halkaasoo ay ku sii adkaaneyso dadka inay bixiyaan lacagta muusikada ama filimada.
Taas bedelkeeda, waxay ku dhacdaa ciyaaraha fiidiyowga, way sii kordheysaa wax caadi ah in la helo tiro badan oo fiidiyowyo fiidiyow ah oo bilaash ah oo leh suurtagalnimada lacag bixinta ciyaarta lafteeda. Tani waa la sii xoojiyay on casriga ah, halkaas oo marka lagu daro lacag la'aan ah, aqlabiyadda badan ayaa ku sharxaya khamaarka internetka. Taleefanka casriga ahi wuxuu si joogto ah ugu xidhan yahay internetka, tani waxay ku dhiirrigelinaysaa horumariyeyaasha inay abuuraan nooc ka mid ah ciyaar ahaan adeeg ahaan, halkaas oo khadka internetku uu joogto yahay oo la'aanteedna ma ciyaari karno. Waxaa jira kuwa badan oo naga mid ah oo aan rabin inay ku tiirsanaadaan internetka si ay u ciyaaraan ciyaaro, ama keydinta xogta awgeed ama caymiska oo liita. Na raac si aan u ogaano 10-ka kulan ee ugu xiisaha badan ee aan ku weydiisanaynin khadka internetka.
1 Ciyaaraha noocee ah ayaa u baahan isku xirnaanta iyo sababta?
4 khilaafka Shelter
7 Baldur´s Gate Kobcinta
8 Candy Saga
Ciyaaraha noocee ah ayaa u baahan isku xirnaanta iyo sababta?
Waxaan leenahay ciyaaro kala duwan oo aan ku raaxeysan karno khadka tooska ah, laakiin isbeddelku wuu cad yahay isku xirnaanta joogtada ah. Sida iska cad cayaaraha cayaartooyda badan sida Call of Duty waxay leeyihiin qiil u baahan xiriirka joogto ah
Sababta qaar ka mid ah ciyaartooyda hal cayaaraha ah ay sidoo kale ugu baahan yihiin xiriirkan joogtada ah, ayaa badanaa ah xaqiijinta liisanka iibsiga, horumariyayaashu waxay noo iibiyaan hab ka hortagga jabsiga. Sababtaas awgeed, isla marka aan bilowno ciyaaraha qaarkood, waxay nagu qasbayaan inaan sameyno koonto oo aan bilowno mar kasta oo aan dooneyno inaan ciyaarno.
Xaaladaha kale, sababtu waxa weeye Waxay u baahan yihiin xiriir si ay ugu dhejiyaan ciyaarteena daruuraha, taas oo dhinac ah la qadariyo, maadaama sidan oo kale aan ku haysan doonno xogteena qalab kasta oo Android ah oo aan haysanno, oo aan waxba luminaynin haddii aan beddelno boosteejooyinka. Waxay sidoo kale dhacdaa in Ciyaaraha qaar waxay leeyihiin looxyo si joogto ahna waxaa loogu cusbooneysiiyaa internetka. In kastoo qaarna ay u muuqato inay xaq yihiin, kuwa kale waxay u maleynayaan inay ikhtiyaar tahay, in lagu ciyaaro kulamadan kumbuyuutar ama casriga xitaa meelaha aanan ku xirneyn.
Maaddaama ay caan tahay, waxay weli tahay mid ka mid ah kuwa ugu soo dejinta iyo ciyaaraha lagu ciyaaro goobta ciyaarta fiidiyowga. Waa ciyaar ku raaxeysata caannimadeeda mahadnaq badan, laakiin waa mid ka mid ah kuwa aan u baahnayn xiriir joogto ah oo lagu ciyaaro. Waxaan kaliya kala soo baxnaa taleefannadeenna casriga ah, kiniiniga ama TV-ga casriga ah oo aan ku raaxeysaneyno iyada oo aan walwal laga qabin.
Ma ahan bilaash, laakiin qiimaheeda waa € 6,99 kaliya, haddii aan tixgelinno tirada kooban ee ay bixinayso iyo inta saacadood ee aan ku maalgashan karno. Waxaan aaminsanahay inay ka qiimo jaban tahay qiimaha.
Ciyaar xujo leh oo si dhadhan fiican leh loo soo saaray oo naga dhigaysa mid dhoola cadeynaya inta lagu guda jiro sugitaanka dheer ama safaradayada gaadiidka dadweynaha. Cayaartu waxay nagu qancineysaa muuqaal qurux badan oo qurux badan, oo leh midabyo dhexdhexaad ah oo ka farxi doona daqiiqadda ugu horreysa.
Labadaba taxane iyo kii kahoreeyayba waa ciyaaro aan waligood ka maqnaan karin terminaal kasta oo Android ah, gaar ahaan tixgelinta in aysan u baahnayn nooc xiriir ah. Sida kuwa ciyaaraha fiidiyowga ee nolosha oo dhan waxay u baahan yihiin oo kaliya in la soo dejiyo oo la ciyaaro. In kasta oo aysan bilaash ahayn, € 5,49 waa ka xaq badan tahay hadaan tixgalino tayada ciyaarta.
Developer: ciyaaraha ustwo
Ciyaar moobil ku-guuleysi sannadka dhowr jeer, waxaan wajaheynaa mid ka mid ah cayaaraha maaraynta ugu fiican ee aan heli karno. Gudaha jawi soo jiidasho leh oo ay bixiso cidlada caanka ah ee ciyaarta fiidiyowga ee Fallout. Adduun lagu burburiyey dagaal nukliyeer ah oo noole kastaaba is beddelay, dhammaantood marka laga reebo kuwa nasiibka u helay ee tobanaan sano ku qaatay hoyga nukliyeerka halkaas oo ay ka fogaadeen dhammaan noocyada faddaraynta shucaaca.
Ujeedadayadu waxay noqon doontaa maaraynta mid ka mid ah hoyga waaweyn ee nukliyeerka, halkaas oo aan ku siin doonno shaqo oo aan quudinno dadka deggan. Xitaa waa muhiim in la kordhiyo dadka iyadoo la abuurayo xiriirro ka dhexeeya, si loo dhaliyo dhalasho badan oo si qayaxan u kordhisa awooddeena sida baaxadda magan-gelyo. Waxaan u diri karnaa safar si aan u soo qaadno sahayda. Waxa ugu fiican ayaa ah inay tahay gebi ahaanba bilaash ah oo leh tiro saacado aan xad lahayn.
Developer: Beytesda Softworks LLC
Classical dhexdooda classics, inkasta oo qaarkeen laga yaabo inay horeba u haysteen in ka badan intii la arkay, laguma waayi karo liis kasta oo ciyaaro ah oo ka yar tan. Waa Orodyahan aan dhamaanayn qaabka ugu nadiifsan Indiana Jones, taas oo ina gelineysa kabaha sahamiyaha oo helay hanti oo hadda ay tahay inuu ka cararo burburka inta uu ku raad joogo xayawaan qalaad.
Ciyaar fiidiyow ah oo fudud oo madadaalo ah oo kugu martiqaadaya inaad sii wadato ciyaarista si aad uga gudubto sumadeena, iyada oo la tixgelinayo nooca ciyaarta ay tahay, macno malahan in lagu soo rogo xiriir joogto ah. Tani waa ciyaar gabi ahaanba waa bilaash.
Waxaan gaarnay mid ka mid ah kulamada ugu wanaagsan taariikhda videogames, oo dhamaan isticmaaleyaasha Android ay hadda ku raaxeysan karaan, taas oo ay ugu wacan tahay la qabsigaas aadka u wanaagsan. Ciyaar lagu taliyay inaad tahay taageere faransiiska iyo inkale, wuxuu noo xaqiijinayaa boqolaal saacadood oo madadaalo ah, qoraal aan wax yar ka hinaasin Hollywood iyo bilic soo jiidasho leh sida ay u fiican tahay. Ciyaartan sheekooyinka aan dhammaadka lahayn looma waayi doono taas oo aan ku qasbanaaneyno inaan feejignaano si aanan u seegin mid kamid ah taariikhda.
Inbadan oo naga mid ah waa taageerayaal doonaya dib u sameynta cinwaankan, tan iyo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee sagaalka ah, mahadsanid astaamaha lagu garto astaamaha iyo bilicsanaanta. Laakiin waa inaan maskaxda ku haynaa ciyaarta buuxda degan 4 GB, iyo sidoo kale qiimaha, 22,99 € Taasi waxay umuuqan kartaa waali ciyaarta casriga ah, laakiin waa waxbadan oo xaq ah hadaan tixgalino tayada sarreysa iyo mudadeeda.
IX khiyaali dambeeya ee Android
Baldur´s Gate Kobcinta
Halyeeyga ugu badan, sharaxaad looma baahna, waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan ciyaaraha lagu ciyaaro kombuyuutarka, ciyaar mahadeeda iska leh mawduuc aan caadi ahayn iyo nidaamkeeda ciyaarta ayaa naga hayn doonta saacado badan. Ciyaar aanu taageere kasta oo jilaa-jilista jilitaanka ahi seegi karin.
Ciyaartu waxay leedahay qiime isku mid ah oo aan ka heli karno meheradaha sida Steam, laakiin waa la-qabsasho aamin ah oo ka tarjumaysa dhibic dhibic wax kasta oo nuqulkiisa asalka ah uu gudbiyo. Waxay yihiin € 4,99 dalacsiin ah, markaa qiimahoodu wuxuu noqon doonaa .10,99 XNUMX, waa fursad weyn oo lagu heli karo heerkan cajiibka ah.
Baldur ee Edition Gate xoojiyay
Shaki la'aan kani waa mid ka mid ah qadiimiga ah ee aan u baahnayn nooc kasta oo sharraxaad ah, ciyaar xujo xiiso leh oo fudeydkeeda iyo midabkeeduba ku faraxsan yihiin dhammaan dhagaystayaasha. Ciyaarta oo ku raaxeysata wax ka badan shan boqol oo milyan oo laga soo dejisto Android. Uma baahna nooc kasta oo xiriir ah si uu u shaqeeyo, qaadataa wax yar waana bilaash. Maxaad kale oo aad u baahan kartaa
Ciyaar kale oo ku saabsan taas oo aan loo baahnayn in la siiyo tixraacyo badan, maaddaama ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan Android, waxay u taagan tahay fududaanteeda maaraynta gawaarida iyadoo wadista arcade ay si buuxda u socoto. Tartanada jidadka adduunka oo dhan oo aysan jiri doonin shilal la'aan iyo shilalka gawaarida kale si loo guuleysto.
Soosaarayaasha heerka sare sida Ferrari, Porsche ama Lamborghini ayaa isugu yimaada kulankaan xiisaha badan. Waxa ugu fiican ayaa ah inay gebi ahaanba bilaash tahay inkasta oo ay tahay ciyaar si culus u culus, taleefannadii duugga ahaa sida Samsung Galaxy S7 duug ah ayaa dhib la’aan u maamula. Gabi ahaanba waa bilaash.
Ciyaar isboorti lagama waayi karin liiska. Iyo maxaa ka wanaagsan isboortiga quruxda badan ee matalaya. Ciyaar macquul ah oo kubada cagta ah oo aan ka helno dhamaan ciyaartoyda dhabta ah tan iyo markii ay leedahay shatiyada FIFPro. Waxay leedahay noocyo kala duwan oo habab ciyaarta ah, oo ay ku jiraan qaab ciyaartoy badan iyada oo aan loo baahnayn xiriir internet ah.
Waxa ugu fiican ayaa ah inaan ku ciyaari karno xakamaynta, Haddii aan leenahay koontaroole loogu talagalay Android ama Dualshock 4 ee PlayStation, xitaa waxaan leenahay suurtagalnimada inaan ku ciyaarno multiplayer maxalli ah isla terminal. Soo dejintu gabi ahaanba waa bilaash ciyaartuna waa fududahay.
Developer: Ciyaaraha Koowaad taabashada.
Cayaar sifiican u qeexaysa inta ay le'eg tahay soosaarka fiidiyowga fiidiyowga fiidiyowga, oo ay tixgeliyeen horumariyeyaasheeda ciyaarta AAA. Ciyaar ficil leh muuqaallo muuqaal ah, taas oo ina geynaysa adduun mustaqbal ah oo ay xukumaan xayawaanno taas oo ay tahay inaan kula dagaallano seefteenna si aan u badbaadno.
Shax ahaan iyo ciyaar ahaanba, waan kula heshiin karnaa kuwa horumariya, laakiin waa iska cadahay in ciyaarta noocan ah ay wax badan lumiso haddii lagu ciyaaro shaashadda taabashada, sidaas darteed Waxaan kugula talineynaa inaad hesho suuf si aad ugu raaxeysato sida haddii ay tahay ciyaarta ciyaarta, waxaan sidoo kale haysannaa suurtagalnimada inaan ku ciyaarno multiplayer isla terminal leh labo suuf. Heerarka 6-da ah ee ugu horreeya waa bilaash, marka la dhammeeyo waxaan iibsan karnaa inta hartay iyada oo hal mar la bixinayo
Developer: Shirkadda Rayark International Limited
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Android » 10 Ciyaaraha Android ee ugu Fiican Internet la'aan